အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုမော်ကွန်းတိုက် 10 ၏စာမျက်နှာ 24 NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး (စာမျက်နှာ 10)
IBC ပြရန်နေ့ 1 အသုတ်စုံ! #IBCShow
အဆိုပါ 2015 အမ်စတာဒမ် IBC ပြရန်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ (သင်ကြာသပတေးနေ့ရဲ့ကွန်ဖရ-သာနေ့ကပါဝင်သည်ဒုတိယလျှင်) ကန်-ပယ်ခဲ့အမ်စတာဒမ် RAI ကွန်ဂရက်နှင့်ပြပွဲ Center မှာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအကူအညီဖြင့်။ မိုးသီး, ထိုဂိုဏ်းရဲ့အားလုံးဒီနေရာမှာမိုဃ်းသီး! အဆိုပါကြီးမားတဲ့ကစားသမားများနှင့်တက်-and နေရဆဲမီဒီယာ၌မိမိတို့မိတ်ဆွေများကိုအဘို့မိမိတို့ဥစ္စာသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ are here: Arri, အသံကွန်ယက်, CueScript, Forbidden ...
အဆိုပါ Beat အသံလွှင့် Beat ရဲ့ဗီဒီယိုအင်တာဗျူးနှင့်အတူတတ်!
အဆိုပါအသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းဇာတ်လမ်းကိုပဲစာဖတ်သူကိုနှင့်သင်ယူမှုကွေး၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှေ့ကိုထည့်လေ့မရှိကြောင်းဖြတ်တောက်အစွန်းသတင်းအချက်အလက်များပံ့ပိုးအတွက်ပိုကြီးပိုကောင်းနှင့်ပိုမြန်ရဖို့ဆက်လက် Beat! အဆိုပါရိုက်နှက်, စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဦးဆောင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်သွယ်ရေးမဂ္ဂဇင်းသာမကသို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဖြူစာတမ်းများ, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောဆောင်းပါးများနှင့် 40,000 ကျော်ပညာရှင်များ၏ directory ကို morphed, ဒါပေမယ့်အခုထားပါတယ် ...
Tedial - Go ကိုခက်သို့မဟုတ် Go ကိုရှားပါး
ဒါဟာထိရောက်တဲ့နှင့်အကျိုးရှိစွာထုံးစံ၌ဖောက်သည်မျှော်လင့်ချက်အတွက်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းအရည်အသွေးကိုန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်တဲ့အခါကုမ္ပဏီကြီးမားတိုးတက်မှုနှုန်းကိုတွေ့ကြုံခံစားကြလိမ့်မည်ဆိုသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပဒေကြမ်းကိုက်ညီသောမှတ်သားလောက်သောကုမ္ပဏီ Tedial ဖြစ်ပါတယ်။ Tedial ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) software ကို developer များနှင့်မီဒီယာအိုင်တီဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစပ်, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာကုမ္ပဏီသောကွောငျ့ ...
10 ၏စာမျက်နှာ 24«ပထမဦးစွာ...«89101112 » 20...နောက်ဆုံး»